खोकी लागिरहन्छ ? के तपाईलाई फो`क्सोमा क्या`न्सर भएको त छैन : यस्ता छन् कारण – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Lifestyle/ Health/खोकी लागिरहन्छ ? के तपाईलाई फो`क्सोमा क्या`न्सर भएको त छैन : यस्ता छन् कारण
जब फोक्सो`को भित्री भागमा रहेका कोष हरूको जीनमा म्यु`टेसन भएर खराबी आउँछ, फोक्सोका कोषहरू अनियन्त्रित रूपमा बढ्छन् । उक्त नकारत्मक तरिकाले वृद्धि हुनुलाई फोक्सोमा क्यान्सर भएको हुन सक्छ ।
फोक्सोको क्यान्सर प्राय: छोरा मान्छेमा देखिने गर्छ । कुल क्यान्सरका रोगीमध्ये १५ देखि २० प्रतिशत फोक्सोको क्यान्सरका बिरामी छन् । फोक्सो क्यान्सरको प्रमुख कारण धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको उपजबाट हुने गर्छ ।
फोक्सोको क्यान्सर दुई प्रकार`का हुन्छन्, स्मलसेल र नन स्मलसेल । स्मलसेल करिब १५ प्रतिशतमा हुन्छ भने नन स्मलसेल करिब ८५ प्रतिशतमा । जब शरीरको सामान्य सेल बिग्रिएर अस्वाभाविक रूपमा बढ्न थाल्छ, तब क्यान्सर विस्तार हुन थाल्छ ।
नेपालले धुमपान विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा समेत हस्ताक्षर गरेको छ । भुटानले मुलु`कलाई सु`र्ती`मुक्त मुलुक घोषणा ग¥यो । नेपालमा यो चेतना कहिले आउने हो ? नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग घटाउने हो भने कुल क्यान्सर रोगीमध्ये एक तिहाइ नै कम भएर जान्छ । नेपाल कै हकमा फोक्सोको क्यान्सरका बिरामीमध्ये करिब ८५ प्रतिशत कमी हुन्छ ।
नेपालमा कुनै आधिकारिक आँकडा नभए पनि केही अस्पताल र उपचारका लागि भारत जाने बिरामीहरूको तथ्यांक हेर्दा आजभन्दा १० वर्षअगाडि ५० हजार क्यान्सरका बिरामी नेपालमा थिए । अहिले करिब ७०÷८० हजार क्यान्सरका रोगी नेपालमा छन् । हरेक वर्षमा २५ देखि ३० हजार क्यान्स रबाट दिवंगत हुने र २० देखि २५ हजार नयाँ बिरामी थपिने अनुमान छ । यो आधारमा हेर्दा फोक्सोका क्यान्सरका बिरामीको संख्या १५ हजारभन्दा बढी भएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
स्रोत :- डा. विजेशराज घिमिरे नेपाल क्यान्सर अस्पताल, हरिसिद्धिका मेडिकल डाइरेक्टर